China Yaskawa welding robot AR1730 mveliso kunye nabenzi | Jiesheng
Yaskawa Welding Robot Inkcazo:
Icandelo lezixhobo ze I-Yaskawa AR1730 irobhothi yokuwelda unokuhlala kwikhabhathi yolawulo lweerobhothi kunye nokuhambisa umbane ngewotshi ngaxeshanye, ukwenza ubeko ngokubanzi lweyunithi yezixhobo kube lula ukuyitshintsha, kunye nokuqonda iwelding ekumgangatho ophezulu yamalungu amancinci kwiyunithi yezixhobo ezihlangeneyo. Ukuphuculwa komgangatho wothutho kunye nokusebenza kokuhamba ngesantya esiphezulu kuncedise ekuphuculeni imveliso yabathengi.
Iinkcukacha zobugcisa ze Yaskawa Welding Robot:
250Kg 2.0kVA 210 ° / umzuzwana 210 ° / umzuzwana
265 ° / umzuzwana 420 ° / umzuzwana 420 ° / umzuzwana 885 ° / umzuzwana
Arc iwelding irobhothi AR1730 ilungele iKhabhinethi yokulawula i-YRC1000. Le khabhathi yolawulo incinci ngobukhulu, iyacutha indawo yokufaka kwaye iyenza izixhobo zihambelane! Ukucaciswa kwayo kuqhelekile ekhaya nakumazwe aphesheya: Ukucaciswa kweYurophu (ukucaciswa kwe-CE), ukucaciswa kweMntla Melika (ukucaciswa kwe-UL), kunye nomgangatho wehlabathi. Ngokudityaniswa kwezi zimbini, ngokukhawulezisa okutsha kunye nolawulo lokuncipha, ixesha lomjikelo liphuculwe ukuya kuthi ga kwi-10% xa kuthelekiswa nemodeli esele ikho, kunye nempazamo yokuchaneka kwendlela yokuhamba xa isenzo sitshintsha singama-80% ngaphezulu kunemodeli esele ikho, siqonda Ukuchaneka okuphezulu, isantya esiphezulu kunye nokusebenza kozinzo oluphezulu.
Inkqubo ye- I-AR1730 irc yokufaka iirobhothi iye yasetyenziswa ngokubanzi kushishino lokuvelisa iimoto. Iindawo zokuwelda ezinje ngemoto isisu semoto, isakhelo sokumiswa, ukumiswa kwemoto, oomatshini bokwakha, oomatshini bezolimo, ukwakhiwa kweenqanawa kunye nezikhokelo zomgaqo zonke zisetyenziselwa ukuwelda iirobhothi, ngakumbi kwimveliso yewelding chassis. . Ukusebenza okuphezulu kunye nozinzo lwe-welding yeerobhothi zenza ukuba abantu abaninzi bakhethe.
Egqithileyo Yaskawa Spot Welding Robot SP210
Okulandelayo: IYASKAWA MOTOMAN-MPL160Ⅱ irobhothi ebethelelayo
Ukuphathwa kweMizi-mveliso yeRobhothi, Ukuphatha ingalo yeRobot, Ukuphathwa kweRobhothi ngokuzenzekelayo, Ukuphathwa kweRobhothi ngokuzenzekelayo, Ukuphathwa kweRobothi yeAxis, Iinkqubo zokuphatha izixhobo zeRobotic,